I-attic ekhethekileyo ye-90 sqm
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJarmo
Indawo esanda kuveliswa kunye nekhethekileyo yesi-3 ye-90 sqm enombono omangalisayo wophahla lwe-Södertälje kwindawo esemazantsi ebekwe phezulu kwendlu yase-Åhléns, kumbindi wedolophu!
Indawo iyamangalisa, endlwini okanye ngaphakathi kwe-radius yeemitha ezili-100 kukho yonke into onokuyicinga oyifunayo; Iivenkile zegrosari, indawo yokuzivocavoca, indawo yokuhlambela, indawo yezemidlalo, iivenkile zempahla, iivenkile zokutyela, iikhefi, iibhari, umjelo weSödertälje oneendlela ezintle zokuhamba kunye namathuba okutshisa ilanga kunye nokuqubha.
Zonke iibhasi zifikelelwa kuphela nge-elevator kuphela ukuya esitratweni kwaye uloliwe oya eStockholm kukuhamba imizuzu emihlanu. Isikhululo sikaloliwe umgama omde Södertälje Syd unokufikelelwa ngololiwe okanye iteksi.
Igumbi lokuhlambela elitsha, elitsha neliyilwe kakuhle elinezixhobo ezinje ngomatshini wokuvasa, iimbiza zesilingi, ukufudumeza okuphantsi komhlaba kunye nokufudumala kwetawuli kunye neefestile ezinkulu njengasegumbini kodwa ngokupheleleyo ngaphandle kokucaca njengoko igumbi liphezulu ngaphezu kwazo zonke ezinye.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo nge-oveni yokuhambisa, i-microwave, i-dishwasher, yonke into esuka kwi-Electrolux.
Ibhedi ephindwe kabini ekhululekileyo (180x200) esuka kwiCarpe Diem yemodeli yeSandö.
Ithafa elikhulu lophahla lwe-10 sqm kunye nelanga lasemva kwemini / langokuhlwa kunye ne-glazed railing.
Uninzi lwefenitshala yi-classics yoyilo lokwenyani, njengoko unokubona kwimifanekiso.
Ukufikelela kwi-terrace yophahla ekwabelwana ngayo kumgangatho we-4 kunye ne-barbecue, ukuhlala kwindawo evulekileyo naphantsi kophahla kakuhle kunye neebhokisi zeentyatyambo ezigcinwe kakuhle.
Igaraji inokufumaneka endlwini kunye nokungena kwayo ngokuthe ngqo kwii-elevators.
Iyafumaneka ngemibuzo kunye noncedo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Centrala Södertälje